Izinto ekuthengeni iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa | Martech Zone
Zininzi kakhulu iinkqubo zokuthengisa ezizenzekelayo Ngaphandle phaya… kwaye uninzi lwazo luzichaza njenge ukuzenzekela ngokuzenzekelayo ngamanqanaba okwahluka kweempawu ezizizo ezixhasa loo nto. Okwangoku, sibukele njengoko iinkampani ezininzi zisenza iimpazamo ezinkulu nokuba usebenzisa imali eninzi kakhulu, ixesha elininzi kakhulu okanye uthenga isisombululo esingalunganga kwaphela.
Ngokukodwa kwitekhnoloji yentengiso, sihlala sibuza imibuzo embalwa kwinkqubo yokukhetha umthengisi:
Lithini eli thuba uyabona ayothathwa lonto? Ngaba kukukhulisa? Ukufumana amanqaku kukhokelela ekwandiseni ukusebenza ngokukuko? Ukunceda i-upsell okanye ukugcina abaxhasi bangoku? Okanye ngaba kukunciphisa nje umthwalo weqela lakho kunye nokuzenzekelayo ezinye zeenkqubo zesikhokelo ozihambisa ngoku.
Loluphi ixesha Kuya kufuneka uphumeze kwaye ubone iziphumo? Kukhawuleza kangakanani kufuneka uphakame kwaye ubaleke ukuze ubone imbuyekezo kutyalo-mali lwakho? Yeyiphi indawo yokuqhawula kunye nokubonisa impumelelo?
Zeziphi izixhobo Ngaba kufuneka uphumeze kwaye ulawule inkqubo? Le inkulu kakhulu! Ngaba kuya kufuneka wenze uphando lomntu? Ngaba kufuneka uphuhlise iihambo zabathengi ukusuka ekuqaleni? Ngaba uyafuna ukukhulisa iitemplate zakho ze-imeyile eziphendulayo? Ngaba ukudityaniswa okuvelisiweyo kuya kusebenza okanye kuya kufuneka ufumane uphuhliso olongezelelweyo ukufezekisa iziphumo ozifunayo?
Yeyiphi idatha Ngaba ufuna ukuqala kwaye uza kuhamba njani ngokufanelekileyo kwaye uhlaziye idatha yohambo lwabathengi ngokuziphatha, ukuthengwa, kunye nenye idatha ehlaziywa? Inkqubo engalunganga kwaye uyakufumana oovimba bakho bome nje uzama ukuguqula kunye nokulayisha idatha phakathi kweenkqubo.
Loluphi utyalo-mali ungayenza? Ayisiyo kuphela ilayisensi yeqonga, ziindleko zemiyalezo, inkonzo kunye nenkxaso, ukuphuculwa komxholo, indibaniselwano kunye neendleko zophuhliso, kunye nokuphunyezwa, ukugcinwa, ukuvavanywa kunye neendleko zokwenza ngcono.
Njengomthetho wesithupha, sicela abathengi bethu ukuba benze imephu kubathengi babo:
Ukufunyanwa -Kwimveliso nganye kunye nomthombo ngamnye wokukhokela, loluphi uhambo oluthathwa lithemba ukuze ube ngumthengi? Faka izixhobo zemveli, izixhobo zokudlulisela, kunye nezixhobo ezikwi-Intanethi. Uyakwazi ukubona ukuba zeziphi iinkqubo ezifanelekileyo, ukuqhuba eyona ngeniso, kunye nexabiso elincinci lemali. Unokuba unqwenela ukusebenzisa ukuthengisa okuzenzekelayo ukwandisa ivolumu yezona zilungileyo okanye wenze ukuba inkqubo ibe yeyokungasebenzi kakuhle kodwa kunenzuzo.
Ukugcinwa -Kwimveliso nganye, luluphi uhambo oluthathwa ngumthengi ukuhlala okanye ukubuya njengomthengi? Iinkqubo zokuzenzekelayo zentengiso zinokuba sisixhobo esimangalisayo sokwandisa ukugcinwa. Unokuhambisa imikhankaso yokukhwela ebhodini, amaphulo oqeqesho, amaphulo okuqala asekwe ekusetyenzisweni, nokunye okuninzi. Sukujonga kancinci ukuba la maqonga anokukunceda njani ukugcina abathengi abakhulu.
Upsell -Ungalonyusa njani ixabiso labathengi kuhlobo lwakho? Ngaba zikhona iimveliso ezongezelelweyo okanye amathuba? Uya kumangaliswa kukubona uninzi lwabathengi bakho abachitha imali kunye nabantu abakhuphisana nabo kuba bengakhange bakuqonde oko kufuneka ubonelele ngako!
Kuhambo ngalunye, ngoku yenza imephu:
Ezabasebenzi kunye neendleko - Zithini iindleko zentengiso yakho kunye nentengiso yokufumana ikhokelo nganye efanelekileyo kunye nomthengi ngamnye?
Inkqubo kunye neendleko - Zithini iinkqubo apho idatha iqokelelwa khona endleleni?
Ithuba kunye neRhafu - Kukuphi ukukhula ekujoliswe kuko kuhambo ngalunye kwaye ingakanani ingeniso eyongezelelweyo enokufunyanwa ngokuzenzekelayo nokwenza ngcono ezo hambo? Unokufuna nokuziqikelela ezi-1%, 5%, 10%, njlnjl. Oko kunokubonelela ulungelelwaniso lohlahlo-lwabiwo mali lokwenza oko.
Unokuba unqwenela ukuphanda ezinye iinkampani kwishishini lakho kwaye uphonononge iimeko zokusebenzisa ezivela kubathengisi abazisebenzelayo. Khumbula oku, nangona kunjalo, amaqonga ezentengiso azishicileli ukumiliselwa okuyintlekele- kuphela ezimangalisayo! Thatha amanani kunye nengqolowa yetyuwa njengoko usebenza ukufumana iqonga elifanelekileyo.
Ngamanye amagama, ngaphambi kokuba uthenge iqonga, kuya kufuneka ubeke zonke izicwangciso zakho kwaye ulungele ukuzalisekisa! Ngokufana nokwakha indlu… kuya kufuneka ubeneeplani phambi kokuba Ugqiba ngezixhobo, abakhi, kunye nezinto ezikhoyo! Xa ubeka imephu ngempumelelo kwizicwangciso zakho, ungavavanya iqonga ngalinye lokuzenzekelayo xa kuthelekiswa neso sicwangciso sokuchonga amaqonga onokuthi uphumelele kuwo. Sibona ukungaphumeleli ngakumbi neenkampani ezithenga iqonga kwaye zizama ukutshintsha iinkqubo zazo ukulungiselela ukusilela kweqonga. Ufuna iqonga elincinci eliphazamisayo kwaye lihlala kakhulu kwizibonelelo zakho, iinkqubo, italente, ixesha, kunye nokubuya okulandelayo kutyalo-mali.
Singacebisa kakhulu ukweqa ukubuza iqonga lakho ngereferensi kwaye ungene kwi-Intanethi ukufumana abathengi. Njengakwimeko zokusebenzisa, izingqinisiso zihlala zithathwa ngesandla kunye nabona baphumeleleyo abathengi. Ufuna ukufikelela kunye nodliwanondlebe nomthengi ophakathi ukuze ubone ukuba yeyiphi inqanaba lenkonzo, inkxaso, izicwangciso, ukudityaniswa kunye nokwenza izinto ezintsha iqonga lakho lokuthengisa elizenzekelayo. Yazi ukuba uza kuva amabali ayoyikisayo- lonke iqonga lokuzenzekelayo linazo. Thelekisa izibonelelo zakho kunye neenjongo kwisalathiso ngasinye kugweba ukuba ingaba inokuxela kwangaphambili impumelelo yakho okanye ukusilela.
Sasinomthengi omnye odibeneyo kunye nokumilisela iqonga elinemivo emithandathu ngokusekwe kuphela kumhlalutyi wabo wokuhlaziya. Xa iqonga lalikhona ilungele ukwazisa babengenaso isicwangciso, akukho mxholo, kwaye akukho ndlela yokulinganisa impumelelo yeyona mikhankaso! Bacinga ngokuqinisekileyo ukuba baya kuba nemikhankaso yesampula kwiqonga abanokuyihlaziya ngokulula kwaye bayithumele… hayi. Iqonga lasungulwa njengeqokobhe elingenanto.
Ukuzibandakanya neqonga kwakungekho zixhobo zoncedo, nokuba yinkxaso yabathengi ekusebenziseni iqonga. Inkampani kuye kwafuneka iphume iye kwenza uphando olwenzelwa abathengi bayo, kuqeshwe abacebisi ukunceda ukuphuhlisa uhambo lwabathengi, emva koko basebenze nabacebisi ukugcina nokuphucula amaphulo. Baye bothuka kukuba iindleko zokuphuhlisa kunye nokwenza amaphulo okuqala zigqumelele ukuphunyezwa kwetekhnoloji yonke.
tags: Ukufumanaukuzenzekela ngokuzenzekelayoukugcinwaphezuluUkukhetha umthengisi
Monika ngcobo (@monika_ngxam)
Ngomhla wama-30 ku-Disemba 2016 ngo-9: 39 AM
Enkosi ngezi ngcebiso, zonke zibaluleke kakhulu. Ukuzenzekelayo kwentengiso kunokuzisa iziphumo ezigqwesileyo, kodwa abathengi kufuneka bazi ukuba sisixhobo kwaye ngekhe sisebenze ngaphandle kwesicwangciso kunye nomxholo. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukukhetha iqonga elinikezela ngenkxaso enobunzima ekumiseni imikhankaso. Ndingathanda ukucebisa ngeSynerise, eliliqonga elinjalo. Abaxhasi abafumani kuphela ukufikelela kuzo zonke izinto, kodwa noqeqesho, uncedo kunye neengcebiso.